Dr. Patrick Young, Onye edemede na aasraw
Dr. Patrick Young dere na Na-aga n'ihu .
1.Gịnị bụ Pregabalin? Pregabalin (148553-50-8) bụ ọgwụ a na-erekarị n'okpuru aha ngwaahịa Lyrica na mpaghara dị iche iche n'ụwa. Ọ bụ ọgwụ mgbochi apịtị na-akpọkwa ọgwụ anticonvulsant. A na-eji ọgwụ ahụ agwọlata ihe ụbụrụ na-eduga na ọdụdụ. N'aka nke ọzọ, Pregabalin na-emetụta ụbụrụ […]
Dabere na nyocha sitere na World Population Review, United States na-eme ọkwa nke 12 zuru ụwa ọnụ maka oke ibu na ndị bi na ya. Centerlọ Ọrụ Maka Nchịkwa Ọrịa (CDC) na-eme atụmatụ na 36.9% nke ndị okenye America karịa ndị gbara afọ 20 bụ ndị buru ibu, dabere na data anakọtara na 2016. Ọnụ ọgụgụ gọọmentị gosiri na 41.1% nke ụmụ nwanyị, na […]